Tag: tambajotra sosialy | Martech Zone
Tag: tambajotra sosialy
Fahafahana misandrahaka any an-dàlam-barotra, any an-dàlam-barotra ary any ambany hivoahan'ny varotra
Alahady 7 Febroary 2021 Alahady 7 Febroary 2021 Douglas Karr
Raha nanontany ny ankamaroan'ny olona hoe aiza no ahitan'izy ireo ny mpihaino azy dia matetika ianao no mahazo valiny tery tokoa. Ny ankamaroan'ny hetsika fanaovana doka sy varotra dia mifandraika amin'ny safidin'ny mpivarotra ny lalan'ny mpividy… saingy efa tara loatra ve izany? Raha orinasa consultation fanovana nomerika ianao; Ohatra, azonao atao ny mameno ny antsipiriany rehetra ao anaty takelaka amin'ny alàlan'ny fijerena fotsiny ireo vinavinanao ankehitriny sy famerana ny tenanao amin'ireo paikady hainao. Mety hanao izany ianao
Bizzabo dia sehatry ny fahombiazan'ny hetsika izay manome ny ekipanao fitaovana rehetra ilain'izy ireo hamoronana hetsika manome valisoa eo am-pivoahana ny fahitana mba hanampiana ny hetsika hitombo amin'ny fomba tsy noeritreretinao hoe mety mihitsy. Bizzabo Event Platform dia manasongadina lozisialy hetsika ao anaty iray ataon'ny Bizzabo ahafahan'ny hetsika mivantana sy mivantana hanaterana traikefa tsy manam-paharoa amin'ny alàlan'ny firosoana manokana ataon'ny tena manokana. Fisoratana anarana amin'ny fisehoan-javatra - amboary tanteraka ny mpitsidika anao hiaina traikefa amin'ny endrika manankarena sy mahavariana, maro
Zoma, Jolay 12, 2019 Zoma, Jolay 12, 2019 Douglas Karr
Manohy mitolona ao anatin'ny indostrian'ny influencer misy metatra tsy misy dikany sy isa ambony izahay. Nitsikera ny indostria aho hatramin'ny nanombohany tamin'ny media sosialy fa ny ankamaroan'ny metrika sy ny sehatra dia tsy mandrefy ny fitaomana, mandrefy ny haben'ny tambajotra, mpihaino na vondrom-piarahamonina fotsiny izy ireo. Izaho manokana dia manana tambajotra tena lehibe… hany ka matetika io dia tsy voafehy ary manana fotoana sarotra aho hikolokoloana fifandraisana tsara amin'ny olona maro izay hajaiko.